Reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ porn ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ porn ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
reboot လုပ်ပြီးတဲ့နောက် porn ကိုဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးဆီကသင်ယူပါ။
တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိခြင်းနီးပါးထူးခြားတဲ့နေသောလူ့သတ္တဝါ, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့သိသာ disinclination အတွက်လည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာဦးနှောက်သည်မှန်လျှင်, မူရင်းအခြေအနေထဲမှာသို့ကျဆင်းသွားကြောင်းထင်ရှားဖြစ်သင့် စှဲမွဲမှု နှင့် / သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ-your Reboot လုပ်သွားဦးနှောက်ကသင်၏လိင်တံဿုံနောက်တဖန်အလုပ်လုပ်လျှင်ပင်, အဖြစ်ကောင်းစွာအားနည်းချက်ဖြစ်သွားသည်။ တကယ်တော့သင်က ပို. ပင်အလွယ်တကူပြန်ပြဿနာများကိုသို့ချော်နိုင်ပါတယ်။
သင်ရုံသင်တစ်ဦး relapse ၏အပို dopamine သူတို့နှင့်အတူ hit တဲ့အခါမှာခရစ်စမတ်သစ်ပင်များနဲ့တူတက်ပွင့်လင်းစောင့်ဆိုင်းနေသောသူတို့အားဟောင်း, sensitized ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အို၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ခက်ခဲသောလမ်းကို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ကြိမ်ထက်မကသင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီမှာ Reddit ချည်ပါတယ် ယောက်ျားတွေ relapse ၏သက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန်.
သငျသညျသူမြားသောရှားပါးလူများ၏တ ဦး တည်းလျှင် နိုင် အခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများမှသင်ယူပါ၊ ပြန်လည် စတင်၍ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသူများ၏အစီရင်ခံစာများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိရသည်။
နောက်တဖန် Porn မှာကြည့်ရှုရန်စဉ်းစား? ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရဲ့အကြောင်း။
ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးတခုခုကိုလူအများအပြားထင်ရလောက်အောင်တွေးချင်ကြတယ်။ အဆိုပါအတွေးမှာ 'ငါ P ကိုအချိန်အကြာကြီးမကြည့်သေးဘူး၊ ငါရှာတွေ့ပုံကိုကြည့်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်' ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က P ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုမှုသည်အလွန်တရာမှအလွန်အသုံးဝင်သည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီအတွေးက 'ကောင်းပြီ၊ ငါကခဏလောက်အရှုံးပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုကြည့်ဖို့ပြaနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, နောက်တဖန်ရပ်တန့်ရန်လွယ်ကူဖြစ်သင့်သည်။ အနည်းဆုံးတော့အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကအဲဒီအတွေးအပေါ်ပြုမူ။ အစပိုင်းမှာတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာလိုက်ဖက်တယ်။ ငါတကယ်ပျော်ခဲ့တယ် ဒါဟာအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းခံစားရပါတယ် '' ။ သို့သော်ငါ M'd နှင့် O'd နှင့်တစ်ပါတ်အကြာတွင်နောက်တဖန်ကြည့်ရှုရန်စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ လအနည်းငယ်အတွင်းအရာတွေဟာကျဆင်းသွားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါ။
၅ နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မ (နှေးကွေးသွားတဲ့အရက်သမားတွေလိုလိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုလိုမျိုး) ၁၂ ကြိမ်လောက်အစည်းအဝေးတွေတက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုနှေးကွေးစေပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုလုံးဝမရပ်တန့်စေခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်အတွင်း P မပါဘဲအများဆုံးအချိန်သည် ၆ ပတ်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အကြိမ်ကြိမ်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၌လည်း၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ငါဥပမာဇန်နဝါရီလနေ့တိုင်းနီးပါး P ကိုကြည့်ရှုတကယ်နှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေ၏။
ဒီတော့ ငါထင်ထားသလို ထပ်ပြီး စွန့်လွှတ်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ (ဆယ်နှစ်အကြာတွင် ဤအချက်ကို လျှော့တွက်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်)။ အဘယ်ကြောင့်?
ကောင်းပြီ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအဲဒီအချိန်ကငါမသိခဲ့ဘူးဆိုတာ P ကိုငါ့ဘဝကသုံးတာကြာပြီဖြစ်လို့အမြဲတမ်းရှိနေနိုင်တဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဆားကစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားတာပဲ။ ၎င်းသည်အားနည်းနေသော်လည်းလက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းသည် P. သို့ပြန်သွားရန်လွယ်ကူကြောင်းအမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မည်
ငါဒီခံစားချက်ကိုစက်ဘီးစီးတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး၊ ဥပမာရေခဲစကိတ်စီးတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်။ ငါအနှစ် 20 အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်မကြာသေးမီကစကိတ်စီး။ ငါကနင့်ကိုအရမ်းတုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိနစ် ၂၀ လောက်မှာရှိတယ်။ ဒီမတိုင်မီကစကိတ်စီးဖူးဘူးသူတစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ၊ သူသည်နာရီဝက်ခန့်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကဒါကိုအသုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့် P ကအတင်းအကျပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ အခွင့်အရေးတဝက်လောက်ပေးပြီးဒီ mode ထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့အလွန်လွယ်ကူတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် P ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်မရရှိပါကသင်ထပ်မံစွဲလမ်းလာသည်ထက်သင်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။ အကယ်၍ မင်းကဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေရင်ငါပြောနေတာကိုစဉ်းစားပြီးသင့်ကိုမေးပါ့မယ်။ ငါ့အဘို့ငါနှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်မှာအားလုံးစဉ်းစားဘူး, ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အစွန်းရောက် P ကိုနောက်တဖန်ခံစားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစတင်ခဲ့သည်။
ငါ P ကိုစွန့်လွှတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းငါထင်သောအခြားအကြောင်းပြချက်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဒုတိယအကြိမ်ပတ်လည်အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပါဘူး ၎င်းသည် ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအရနားလည်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည် (ကျွန်ုပ်သည်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဟုထင်သည်) ငါ P ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါစွန့်လွှတ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာမေးခွန်းတွေပြည့်နေတယ်။ ငါလုပ်လို့ရလား။ ငါစိတ်ပျက်နှင့်အတူပေါက်ကွဲလိမ့်မည်နည်း ငါ့ဘဝကလုံးဝအံ့သြစရာကောင်းလာမလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါနောက်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်နည်း ၎င်းသည်စဉ်းစားရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြီးပြင်းလိုသော်လည်းစိန်ခေါ်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။ ဤမေးခွန်းများသည် P မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအချိန်များတွင်ခရီးကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ငါ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းစွဲနေတဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းပြောပြဖို့ပဲ။ ဒါကကြောက်စရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးသူ့ကိုလှပတဲ့နည်းနဲ့သူနဲ့သူနဲ့တကယ်ချိတ်ဆက်မိစေတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်မှာသင် dopamine နှင့် adrenaline ကဲ့သို့ ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်မှုအစပျိုးခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိသည်။ လှပသောဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ (သဘာဝ opioids များထုတ်လွှတ်ခြင်း) လည်းရှိသည်။
ယခုအခါ dopamine ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းကနည်းနည်းလေးအံ့သြစရာကောင်းသည်ဟုသင်ထင်မြင်မိသည့် P ကြယ်တစ်ပွင့်အသစ်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်တူသည်။ သို့သော်ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဦး ထုပ်ဟောင်းဖြစ်သည်။ သင်ကြယ်ပွင့်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်အရှုံးပေးနိုင်သည်ကိုငါသိ၏။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြောပြခြင်းဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးကြောက်စရာလည်းမကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့်အဓိကအချက်ကဒုတိယအကြိမ်စွန့်လွှတ်ခြင်းက (အနည်းဆုံးတော့) ကပိုပြီးခက်ခဲတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာမဟုတ်သလိုပထမဆုံးအကြိမ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။
စိတ်ဓာတ်ကျနေသူအချို့ကိုသင်ထပ်မံလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်လျှင်ပင်သင်တစ်ချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပြန်လည်စတင်နိုင်သည်ဆိုသောအချက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ဆိုလိုရင်းကားအဘယ်နည်း။ ပြီးတော့မင်းမှာငါအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အစစ်အမှန်ပြယုဂ်လို့ခေါ်တယ်။
ဒီတော့ငါ့ရဲ့အကြံဥာဏ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွေ့အကြုံကနေ၊ P ကိုမကြည့်တော့ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံး cheeky အထွတ်အထိပ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိလား။
လူတစ်ယောက်ကိုတောင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရှိခဲ့လျှင်အနည်းဆုံး၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်အတွင်း P နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ဆင်းရဲမှုအချို့ကိုရည်ရွယ်ပါသည်။
Re: Porn ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်စဉ်းစားနေတာလား။ ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရဲ့အကြောင်း။
ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် p ကိုထပ်မံစွန့်လွှတ်လိုသူများအတွက်ခက်ခဲသောအချက်မှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့၏ဘ ၀ အတွက်ဘယ်လောက်ဆိုးရွားနေသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီနောက်သူတို့ပြန်လာကြပြီးသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကဆုချတယ်။ ကမ္ဘာကြီးလှည့်နေတုန်းပဲ။ အလင်းနေဆဲ။ ထိုအကခံစားရပါတယ်! မကောင်းတဲ့အရာဘာမှမဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ပရိုဂရမ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခက်ခဲစေတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာ Odysseus နဲ့ sirens တွေလိုပါပဲ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတယ်။ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါတို့သိကြ၏။ သို့သော်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများရှိသော်လည်းငါတို့အားလုံးပခုံးပေါ်ရှိမကောင်းသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံရှင်းပြရန်မကောင်းသည့်စိတ်ကူးတစ်ခုအဘယ်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြသည့်တစ်နေရာသို့ရောက်သွားသည်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းပါတယ်ကျနော်တို့စီမံကိန်းမေးခွန်းထုတ်။ ငါတို့သည်တွေးမိသည်တကား။
အဖြေမှာ - ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ကတိုင်မှကိုယျ့ကိုယျကိုချည်နှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးဆောင်မှုလွန်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အိုကောင်လေး၊ ငါတို့အရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။
ဒီနေ့မနက်မှာငါနိုးလာပြီးအမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့အော်သံကိုကြားလိုက်ရတယ် .. အော် .. ငါ့နာမည်ကိုခေါ်တယ်။ ဆူညံသံကိုကျွန်မရဲ့ဗီရိုထဲမှာလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မရဲ့ hard drive ကငါ့လက်ထဲကိုခုန်တက်လာပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတင်းတိုက်တွန်းတယ်။
......... အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပုပ်သောဒစ်ကိုရလိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေပြီ။ ယောက်ျားတွေဘာလုပ်ကြမလဲ ငါ့စူပါအင်အားကြီးများပြန်လာကြမလား။ PIED 50 နေ့ရက်ကာလ၌ကုသပေးခဲ့၏။ ထိုအခါငါ porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ - တိုးတက်မှုကြီးပြီးနောက်ကျွန်တော့်ရဲ့ PIED ပြန်လာပြီ - ငါနောက်တစ်ခါ porn ပြန်ကြည့်တယ်၊
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမည်ကဲ့သို့ပျက်စီးနိုင်ကြောင်းလေ့လာခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်သည် PIED နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကငါ့ကိုစွန့်ခွာခါနီးပြီ၊ ငါလေဆာအာရုံစိုက်တယ်နှင့် porn / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း 18 လကြာ။ ကြီးစွာသောစိုက်ထူလာပြီကျနော်တို့ကြီးမြတ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ငါလှည်းကိုလှဲချနှင့်လအနည်းငယ်အကြာတွင် PIED ပြန်လာ၏။ လွန်ခဲ့သော ၄၁ ရက်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခမဲ့ဘဝပုံစံကိုပြန်လည်ရရှိရမည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ permalink
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုနှစ်လကြာအောင်ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ် PIED နှင့်များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုလာသည်၊ ငါမိန်းကလေးနှင့်အတူကတက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုခုကြည့်တာကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သမျှတိုးတက်မှုကိုပြန်ပြောင်းနိုင်တာကရူးနေတယ်။ 🙁
လိင်တူချစ်သူ - (ED) ငါ့ ဦး နှောက်ပျောက်ကင်းသွားပြီ။ အပြုံးတစ်ခုကြောင့်ငါနိုးလာနိုင်တယ်
PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးသည်: ကြောက်မက်ဘွယ်လိင် & ကောင်းသောစိုက်ထူ။ ထပ်ပြန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးပြီး
ဤနေရာတွင်အလွန်မှန်ကန်တစ်ခုခုရှိပါသည်။ ရှည်လျားသော Streak ပြီးနောက်ပြန်စိုးရိမ်စိတ်။ စိတ်ကိုလွဖြစ်ပါတယ်။
Shit * ပြန် လာ.
ငါသည်အခြားသောသူတို့အားကဲ့သို့ဆိုးရွား fapping နှင့်ညစ်ညမ်းကြောင့်ထိခိုက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလူဦးရေရာခိုင်နှုန်းရှိကွောငျးယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမဆွအရသာ porn နှင့်ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်သောရာခိုင်နှုန်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
တရာနောက်ဆုံးသမျှကာလ၌ငါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းဆုံးဗားရှင်းနဲ့တူခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်မအလွန်ကောင်းစွာပေးဆောင်အလုပ်ရခဲ့တယ်, မောင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, ငါတစ်ခုကြောက်မက်ဘွယ်ရည်းစားရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ညကငါ fapping ကိုပြန်စနိုင်ပြီဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မိတယ်။ ဒါနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ် နောက်သုံးကြိမ်မြောက်။ ငါထင်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်လုပ်ခဲ့တယ်
မင်းရဲ့စိတ်ပူပန်တဲ့အခါဒီခံစားချက်ကိုမင်းသိသလား၊ ငါဒါရက်ပေါင်းတရာကျော်အဘို့အဖူးဘူး။ မနေ့ကငါအိမ်မှာပါတီတုန်းကအပြည့်အဝအင်အားစုနှင့်အတူပြန်လာ၏။ ငါ့ရည်းစားကငါနေကောင်းလားလို့မေးတယ်။ တကယ်တော့ငါကလူနဲ့တဖန်ပေါင်းသင်းဖို့ကြောက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာလုံးဝဖြစ်ပျက်နေတာကိုလုံးဝရူးသွပ်တယ်။ ဒီဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာမဟုတ်ပါ ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတစ်ခုခုသည်သင်၏စိတ်ကိုအမှန်တကယ်အထိဖြစ်စေသည်။ ငါ၌လိင်များစွာရှိသည်ဟုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သုက်ပိုးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ဒီအဖွင့် fucked အရူးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကပိုပြီးလေ့လာမှုများပြုပါရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငါ၏အတံဆိပ်ကို reset ဖို့အချိန်🙁
18 နှစ်ပေါင်း2နှစ်ဟောငျး Porn သွေးဆောင် ED
ငါပြောစရာအနည်းငယ်အရေးကြီးသောအရာများရရှိထားတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာကျွန်တော့်အသက် ၁၆ နှစ်မှာ ED ရှိခဲ့တာကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေခဲ့သမျှထဲမှာအလှပဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်အိပ်ရာထဲမှာလဲနေခဲ့ရပါတယ်။ သူမအပျိုစင်ဘဝကိုယူတော့မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကယ်ရန်မခက်ခဲနိုင်ပါ။ ဒီမိန်းကလေးဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာမင်းနားမလည်ဘူး။ သူမငါအရင်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိခဲ့သည်မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်လာတယ်။ အဲဒါကအရမ်းရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ငါဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မမှန်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတာကငါနောက်ဆုံးမှာဆေးရည်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနောက်မှာဆုတစ်ခုရခဲ့တယ်
သူမထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဝက်ဘ်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေ။ YBOP.com ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် - ကောင်လေးအဖြေရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာသည်။ အရာရာတိုင်းဟာရှင်းလင်းလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး။
ငါ 13 အခါဈ masturbated ခဲ့သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbated နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံကိုယ့် porn ကိုကြည့်ထိုအခါမူကား, ကမပါဘဲ masturbate မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့် 13 ခဲ့သောအခါငါတော်တော်များများနီးပါးနေ့တိုင်း porn watched ဆိုဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
ကလိုက်တယ်ရရှိသွားတဲ့ဘယ်မှာအခုဒီမှာပါပဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲလမ်းမှုကငါ့ကိုလိင်တူချစ်သူတွေ၊ ငါပြောဖို့အရမ်းရှက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ ၁၀၀ ရာနှုန်းဖြောင့်တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါကဒီအမျိုးအစားတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့။ ငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါဂေးမဖြစ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါ pmo ပြုပြီးနောက်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ရွံရှာခံစားရမယ်လို့။ ငါပုံမှန်လိင်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊
ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့အတူရှိနေတဲ့တစ်ရက်မတိုင်ခင်ဒီအရာအားလုံးကိုငါလျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ ယခုငါအသက် 18 နှစ်မှာယနေ့အစာရှောင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကတည်းက pmo နှင့်အတူပေါ်နဲ့ off ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ရပြီ။ အဘယ်ငါသင်ယူကြ porn အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့် mo အကျင့်ကိုကျင့်တက်ပေးခြင်းကြောင့်ပါ! အဆိုပါ အရှည်ဆုံးငါအကြောင်းကို 55 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကြပြီ ယုံကြည်ပေမယ့်ငါအချိန်အတွက်တိုးတက်မှုမြင်ကြပြီ။ ငါကသူ့ကိုနမ်းသောအခါအသေး, ငါချက်ချင်းစိုက်ထူရလိမ့်မယ်သမျှသောဆွဲဆောင်မှုပင် wasnt သူတစ်ဦးကမိန်းကလေးနှင့်အတူရှိ၏ (ငါ 55 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိသည့်အခါ) ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီသတိရပါ။ ငါသည်ငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးစိုးရိမ်ရန်မလိုဘဲကွန်ဒုံးပေါ်တွင်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အခြားမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေခဲ့ပြီးသူမ၏အပျိုစင်ဘဝကိုယူရန်အခွင့်အရေးလည်းရခဲ့သည်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကတည်းက ၄၀ အထိရောက်လာတယ်။ နေ့ ၄၀ အတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်က၊ ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေပြီးသူနဲ့သူမအနားမှာရှိနေတဲ့အခက်တွေ့နေတယ်။ ငါနှင့်ပတ်သက်။ 40 နာရီအဘို့ငါနှင့်ငါတစ်ခုလုံးကိုအချိန်တစ်ခုလုံးကိုစိုက်ထူခဲ့ငါအပြည့်အဝတ ဦး တည်းဆိုလိုကျိန်ဆို!
ကံမကောင်းစွာပဲငါ cocky တယ်ငါ porn မပါဘဲထိုနေ့ရက်ကာလကို mo ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ပြန်သည်။ သူမအနိုင်နိုင်နမ်းလိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားခဲယဉ်းသည်။ သူမသည်ငါ့ကို handjob နှင့်ဘာမျှမပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ ... ငါ MO ကိုအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်လည်မှုကြောင့်ငါသိ၏။
ကောင်းပြီလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီနေ့ ၃ ကိုဖုန်းဆက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လာခဲ့လို့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်ကြိမ်သွားရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိကြောင်းသိသော်လည်းကျွန်ုပ်နေရန်လိုအပ်သည့်နေရာကိုသွားရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ အထူးသဖြင့်အသက် (၁၈) နှစ်အရွယ် ed မှဝေဒနာခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါနင့်ကိုစောင့်ရှောက်ထားတာတွေအားလုံးကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်။
အသက် ၅၀ - ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသည်
ဒါဟာအားလုံးပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီရဲ့အစမှာ nofap ကြိုးပမ်းပြီးနောက်စတင်ခဲ့တယ်။ အားလုံးရုတ်တရက်ငါ drive ကိုခဲ့ရသည်။ ငါလက်တင် (အလွန်ခက်ခဲလူတန်းစား) တွင်နွေရာသီအတန်းအစား aced ။ ငါ ထွက်. မိန်းကလေးတစ်ဦး IRL (အလွန်အေးမိန်းကလေး) နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။
ထိုအခါ။ တစ်ဝက်တစ်ပျက် summer- မှတဆင့်ကျွန်မ fapped ။ ငါနွေရာသီသင်တန်းပြီးစီး, လူမှုရေးအောင်မြင်မှုများ, အသက်အဘို့အသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့စိတ်အားထက်သန်ဆင်နွှဲသင့်ကြောင်း, ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်။
အဲဒါကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့တစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ငါညာဘက်အစာစားတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုremoteရာမအဝေးထိန်းခိုင်းထားသူတစ်ယောက်ကခေတ္တရပ်တန့်လိုက်သလိုပဲ။
နောက်ကောလိပ်မှာနောက်ထပ်အတန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ fuck ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုကိုအလွဲသုံးစားပြုခဲ့တယ်။ နှင့်ငါ့ရွယ်တူချင်းကနေလူမှုရေးအရအထီးကျန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (အတန်းမတက်ရသည့်အထိ)
ကံကောင်းတာကကျွန်မရဲ့မိဘတွေတကယ်ထောက်ခံကြသည်။ သူတို့မရှိဘဲငါ အလိုတခုတည်း အခုလမ်းမများပေါ်တွင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးညဥ့်အဖေငါ့ကိုမေးသော်, “ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမင်းဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ။ နှင့်တစ်ဦးအလင်းကိုငါ့ဦးခေါင်း၌ပယ်သွား၏။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1fq4jg/what_were_you_doing_that_made_you_so_productive/
အသက် ၂၅ နှစ် - ဒုတိယ reboot: စွမ်းအင်တိုးတက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှု၊
ယခုတွင်ငါသည်အကြောင်းကို3နှစ်ပေါင်း NoFap အပေါ်ပါပြီ။ ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကကြီးမားတဲ့ Streak အပါအဝင်အများအပြားအတက်အကျရှိခဲ့ပါပြီ။ နောက်ကျော 2014 ၏နွေရာသီအတွက်ငါသည်ငါ့ရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ကျွန်တော်ရင်းနှီးလာတယ်, ဒါပေမယ့်အမှုအရာရှည်လျားသောအကွာအဝေးလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကကျွန်မလကြာသည်စင်ကြယ်ခဲ့ရနှင့်ခိုင်ခံ့သောခံစားခဲ့သည်။ ကျွန်မကျောင်းသွား၏နေချိန်မှာအမှုအရာကောင်းသောခဲ့ကြသည်ကျနော်တို့အတူတကွတယ်အခါအံ့သြဖွယ်ပါပဲ!
ငါနွေရာသီမှာငါ့ရည်းစားနေထိုင်တဲ့မြို့တမြို့တည်းမှာပဲအလုပ်သင်အဖြစ်တက်ခဲ့တယ်။ ငါတို့အတူတူ3လအတူတူနေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကာလကကြီးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်မှုရှိစွာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ အဲဒီလတွေအတွင်းမှာအခြေအနေတွေကအားကောင်းလာပြီးကျောင်းမှာနောက်လာမယ့်စာသင်တော့မယ်ဆိုတာကိုငါယုံကြည်တယ်။ ကျဆုံးသောစာသင်သည်မကောင်းပါ။ သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာဆက်နေပြီးဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ထိုအခါနွေ ဦး စာသင်ထိမှန် ... ငါဒီစာသင်နေစဉ်အတွင်းအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ပြည့်ကျောင်း၏ထိပ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်သုတေသနစီမံကိန်းတစ်ခု၊ အလုပ်နှစ်ခုနှင့်နောက်တနင်္ဂနွေစီးပွားရေးစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုတက်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းကျောင်းဝင်းကလပ်နှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်ကျောင်း / စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောကွန်ဖရများအတွက်အများကြီးခရီးထွက်ခဲ့သည်။ ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်သိပ်နည်းလွန်းစွာလုပ်ဖို့လမ်းအများကြီးရှိဖို့ထားခဲ့တယ်။ ငါဖိအားအောက်မှာရှင်သန်မယ်လို့ယူဆတယ်။ ဒီအလုပ်တွေအားလုံးကကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်သူမကိုတွေ့ဖို့ခရီးသွားဖို့ခက်ခဲစေတယ်။
ဖိအားတွေများလာပြီး PMO နည်းနည်းကစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးသလိုခံစားရတယ်။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့ဒါအများကြီးပိုဆိုးစေ၏။ ငါ PMOing ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ငါအတန်းထဲတွင်တက်နေစဉ်သို့မဟုတ်အိပ်ရာဝင်ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်စာလုပ်ခြင်းများအစားညလေးနာရီအထိသာတည်းခိုရန်သတ်မှတ်ထားချိန်တွင်အဆိုးဆုံးအချိန်များဖြစ်သည်။ ငါမြူခိုးခွံဖြစ်လာတယ်။ ဒါကိုငါ့ရည်းစားဆီကဝှက်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေသလိုပြုမူခဲ့တယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျမီးလောင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့ချော်ပါပြီ။
မနေ့ကငါ pivatol ယခုအချိန်တွင်ကိုနှိပ်ပါ။ ငါသေလွန်သောသူတို့သည်ခံစားခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းဖြစ်ခြင်း၏ဒါကြောင့်အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့လာပြီခဲ့သည်စတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်အတိတ်ကာလလအနည်းငယ်ကျော်မှတဆင့်သွားခဲ့သမျှကိုဘော်ပြတောင်းပန်ငါ့ရည်းစားကိုခေါ်။ သူမသည်ခက်ခဲယူလေ၏။ ဒီတော့ခက်။ သူမသည်သူကသူမတစ်ဦးကောင်းရည်းစားဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ငါ့ကိုနှမဟုတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုခုပဲလို့ထင်တယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ PMO ငါ့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အဘယ်သို့ငါတစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ခံစားရစေသည်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လိုသူမ၏သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ဆကျဆံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အမှုအရာထ patch မှစီမံခန့်ခွဲပေမယ့်ယခုသူမဒီငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးမျိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီလောက်ကြမ်းတမ်းတယ် ငါကုထုံးဆရာတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးရက်ချိန်းယူရန်ရက်စွဲကိုကြိုးစားကြိုးစားနေသည်။ ငါသည်ငါ့အကြံပေးအီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ငါ့စီမံကိန်းကိုကျဆင်းသွားသည်။ အခုအလုပ်တစ်ခုကျသွားပြီ အခြေခံအားဖြင့်တော့ကျွန်မဘ ၀ ထဲကစိုးရိမ်စရာတွေအများကြီးကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပင်ငါ့တိုက်ခန်းမှာစုပုံခဲ့ကင်လုပ်ခိုင်းထဲကတဆင့်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုသင်၏ SO ကနေသိမ်းထားပြီဆိုပါစို့။ ဒီ shit ကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှိပ်စက်နေလို့သူ့ကိုပြောပြပါ။
ရက်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် - ငါ PMO ကိုမှီခိုခြင်းမရှိသောဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်မှအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်
ငါအရင်က nofap ပွုပါပွီ။ ရက် ၉၀ ပြည့်သွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာငါရည်းစားအသစ်ရနေပြီ။ များစွာသောအေးမြသောအရာ။ အရာရာအားလုံးကောင်းမွန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တွေးမိတာမှားသွားတယ်။ ငါ PMO ပြန်သွား။ အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်သွားလေ၏။ အလုပ်, ပျင်းရိ, အဝလွန်, မကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမကြိုက်ဘူး။ [ဒုတိယပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ]
၁.၅ နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာပြီးကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ၀ မ်းသာပါသည်
ငါပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုငါ fapping ကိုပြန်မရပ်ချင်တော့ဘူး၊ ဒါကငါသတိပြုမိသောအရာ:
ဘယ်ပုံဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားနေပါစေကျန်းမာတဲ့ fapping ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုဆောင်းပါးတွေနဲ့အတူငါဘယ်လိုသက်သေပြရမလဲ။ သငျသညျယောက်ျားတွေခံစားချက်ကိုငါသိ၏။
ငါအမျိုးသမီးတွေချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်လိုက်စားရန်လျော့နည်းဆန္ဒရှိဖြစ်လာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတာဟာဝေးလံခေါင်ဖျားမှုတစ်ခုပဲဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါကငါကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ဖို့မလိုပါဘူး၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့အိမ်ထောင်ဖက်ရှာဖို့မကြိုးပမ်းရဘူး (ဒါမှမဟုတ်လိင်မပါ ၀ င်ရဘူး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ) ။
ငါအော်ဂဇင်ကိုဘယ်လောက်မြန်မြန်ရလိုက်သလဲဆိုတာကိုထိတ်လန့်စရာဖြစ်ခဲ့သည် ငါ ၁၄ နှစ် (ယခု ၂၇ နှစ်) မှစ၍ နေ့စဉ်နီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလုပ်နေခဲ့ပြီ၊ ဒါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာမှရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများအပြင် ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်မြန်ဆန်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းအော်ဂဇင်ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးမျှတသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလိုလားလျှင်၎င်းသည်ကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ပြောသကဲ့သို့များများစူးစမ်းလေ့လာရန်မကူညီနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏လိင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ပြောထားသည်ထက်များစွာအသုံးချရန်ကူညီသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ၁၃ နှစ်ကျော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး“ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိလာပြီ” ဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ၊
ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည် reboot လုပ်သူယောက်ျားတွေများအတွက်
ငါ 110 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ် reboot ပြု. , နေ့၌ငါ၏အ ED လုံးဝပျောက်ကုန်ပြီတို့နှင့်ကြီးသောလိင်ခဲ့ရတယ် 95 ။ ဒါပေမယ့် .. ကံမကောင်းငါပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်6ပတ် porn အပေါ် binged .. (pmo (2 တခါတရံ3ကြိမ်တစ်ပါတ်) နှင့်ကျနော်စပ်စုခဲ့တာယခုငါ2ရက်သတ္တပတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဒုတိယ reboot အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မနောက်တဖန်ကြီးတွေ flatline ဖြစ်၏။
ဒီတော့ငါ့အမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ပုံ IS / ဒုတိယ reboot ကဲ့သို့ဖြစ်၏? အိုင်တီ (ED FROM မှ?) နေသမျှကာလပတ်လုံးမှာ FIRST reboot ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရယူ DID
ငါသည်ငါ့လိုင်စင်, ငါ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်နှင့်လုံးဝလျော့ပါးရေးအတွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတယ် (ပြီးတော့အားလုံးပယ်ရှားပစ်)
အဘယ်အရာကို 90 ရက်အကြာမှာဖြစ်သွားမလဲ တစ်ဦးကစစ်ပြန်ရှုထောင့်
441 ရက်အကြာကျွန်မပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Nofap စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 12 နှစ်အတွင်းအတွက် masturbating မဟုတ်, ငါ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ငါ၏အစိတ်ကျရောဂါလည်းညှိုးနွမ်းစတင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ပိုသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ယင်ပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်, အမျိုးသမီးများနဲ့ငါ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမြင့်တက်နဲ့ကျွန်မ။ သင်ဒီမှာငါ့အကိုမူလ 90 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်: http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/21nhjz/90_day_report_how_i_did_it_and_how_you_can_do_it/
Nofap ၏အကြောင်းကို 180 ရက်ပေါင်းနောက်မှငါနောက်လာမည့်အရာကို wonder- ဘယျသူနညျး အစဉ်အမြဲငါ FAP မရှိသလား ကကျန်းကျန်းမာမာလမ်းအတွက် masturbate မှသင်ယူဖို့အကျိုးရှိသည်မဟုတ်လော မေတ္တာနှင့်ငါ့ကိုယ်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့လား ငါဘာလုပ်ရမှန်းသေချာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါ Nofap ပတ်လည်ကြည့်ရှုဒါပေမဲ့လူအနည်းငယ်ရှိထင်မြင်ချက်များ shared ငါ့အနေအထားတွင်ရှိခဲ့သည်။
ဒီတော့အကြောင်းကို 220 ရက်ပေါင်းမှာငါတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး compulsive လမ်းအတွက်ပထမဦးဆုံးမှာ, တဖနျ masturbate မှစတင်ခဲ့သည်။ porn နှင့်မျှစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိနှင့်အတူ, ရုံခံစားမှုခံစား။ ပထမတော့ငါသာတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ပြုသတည်း။ သို့သော်အလွန်လျင်မြန်စွာငါထိန်းချုပ်မှုထဲကခဲ့တာပါ။ လာမယ့်4လကြာငါ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ရှုံးနိမ့ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
မယုံနိုင်လောက်အောင်, အကအနုတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးပြန်လာ၏။ ငါ, ငါ၏ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားတဖန်ငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် lethargic ခံစားရရန်စတင်ခဲ့ပြီးပဲနောက်တဖန်တစ် pussy များကဲ့သို့ပြုမူလာတယ်။ ငါမိန်းကလေးငယ်များ လိုက်. အစားအခြားလမ်းတဝိုက်, ငါ့ဆက်ဆံရေးအကျအဆုံးများနဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံမုန်းတဲ့တစ်ပင်လယ်၌တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ငါတစ်နေ့ 21 မှာယခုဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မနောက်တဖန်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ တကယ်အကောင်း, နေ့ညဉ့်မပြတ်ကောင်းသောလိုပဲ။ ငါဒါ Nofap အလုပ်လုပ်တယ်, ငါ့ကိုပဲပြောပါရစေမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤလမ်းခရီးတွင်ဖြစ်ရပြီ!
ဒီသင်ပထမဦးဆုံးတာရှည် Streak ကြောင်းသူတို့အဘို့, nofap များ၏အပြုသဘောဆောင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါငျးတို့သစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းငါ့ကိုခိုလှုံပါ၏။ ထိုအ 90 ရက်ပေါင်းအတိတ်သင်တို့တွင်သူတို့အဘို့, ဒီ post ကိုသင်တို့အဘို့တကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမသက်ဆိုင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်စေမည်နှင့်သင်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ငါ၏အဇာတ်လမ်းကိုသင်တို့ကိုရွေးကောက်သမြှကိုလမ်းကြောင်းသင်ပဲ့ပြင်နိုင်မယ့်စကားသံကိုရလိမ့်မည်။
PIED, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, ကတိကဝတ်။
နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်နဲ့ငါ့ဘဝတစျခုလုံးရုန်းကန် 33yo လက်ထပ်အထီး။ ငါ PIED သည်ထင်သောအရာကိုသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ 60 နေ့ကလွယ်ကူသော mode ကို Streak ခဲ့ပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင် Chaser ပြီးနောက်၏နောက်ကျော fapping သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ PIED နှင့် DE ညာဘက်ကျောလာ၏။
ကျွန်တော့်ကို Viagra ညွှန်ကြားပေးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအကြံပြုပါတယ်။ ယခု9ရက်မှာ။
သင်ကအနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏ပြီးနောက်များအတွက်တစ်ဦးက Long Term သတိပေးခြင်း (total ဤအရာအားလုံးကိုမေ့ဘယ်တော့မှမ)
YBOP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး [www.yourbrainrebalanced.com] သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူ fappers များ၏ဖြုန်းတီးသောမျိုးစေ့ကြောင့်မွေးဖွားလာသည့်ကလေးမျှသာဖြစ်သည် (ကောင်လေးကကြီးထွားလာသည် - ကျွန်ုပ်သည်အားလုံးနှင့်တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်ဟုထင်မြင်သည်။ 'အားကောင်းတဲ့မာနကြီးတဲ့အဖွဲ့ဝင်' 😉
'Pron' သည်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သောဆန့်ကျင်သူဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထို 'ထူးခြားသောအချိန်များ' တစ်ခုကိုချက်ချင်းရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင်မြင်ဖူးခြင်းမရှိသောမျက်မမြင်ဆန်သောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသံသယဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းအသံက 'yup sucker၊ ငါမင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်' လို့ပြောနေတာပဲ။ ညင်ညင်သာသာ။ Pron ဆိုသည်မှာမင်းရဲ့ချစ်သူဟောင်း (သို့မဟုတ်မကြာခင်ဖြစ်လိမ့်မည်) - သူမကိုအနားယူရန် 'အိပ်ခြင်း' သို့မဟုတ်သူမမှမင်းကိုနှင်ထုတ်မည် သင်္ချိုင်းတပါး၊ (သူငယ်ချင်းတွေဒီပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါငါတို့အားလုံးမှာ Pron ရှိတယ်။ သူမမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ငါတို့အားလုံးမှာမရှိခဲ့တာလဲ၊ ဘာလို့များမရလဲ - ကောင်းတာက :-))
နှစ်တွေတစ်လျှောက်ငါ့အဖော်ဟောင်း 'Pron' ကိုငါဖယ်ရှားပစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ လွယ်ကူတယ်။ ငါ Pron ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာငြီးငွေ့ခဲ့ဖူးပြီးဆက်ရှင်သန်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။ သူငယ်ချင်းများကအလုပ်မလုပ်ကြသေးပါ၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းနှင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းသည် ပို၍ ပညာရှိလိမ့်မည်။
ထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည် 'Pron' ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ (ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုခု) သည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုပြသရန်ပိုလာခဲ့သည်။ YBOP ပေါ်ရှိ rebooting အကောင့်များအားလုံးဖတ်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည်သူတို့၏အတွင်းငြိမ်သက်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ အချို့ကသူတို့၏ဘဝအသစ်ငှားရမ်းခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး သည်ပျံသန်းနိုင်ပြီးစွမ်းအားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရဲ့အပြုသဘောဆောင်ဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအခြားမေးခွန်းများစွာဖြစ်စေပါတယ်။ …
အဲဒီမှာသင်၌ရှိသည် - ၎င်းသည်အားရကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည်။ - အခြားသူများအတွက်လုပ်ပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်အားလုံးရောက်လာသည် - အောင်မြင်မှုတစ်ခု
ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ခေါင်းကိုက်တယ် ကျွန်တော်လုပ်တာပါ!
နှစ်ပေါင်းများစွာဤအရာများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးသောနောက်တွင် 'Pron' ကို ၀ င်ရောက်မည်ဟုငါမဆိုင်းမတွစဉ်းစားခဲ့သည်။ အရူးတစ်ယောက်လိုငါ 'Pron' ကိုပြန်စစ်ကြည့်ရသည်မှာသူမကိုငြီးငွေ့စရာကောင်းသည်ဟုငါထင်သည်။
ဒီနေရာမှာကန်သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒါကိုငါကြည့်နေတုန်းပဲ (ငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်) ဒါပေမယ့် 'Pron' ကသူမရဲ့လက်သည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့တူးပြီးငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်လှည့်စားနေတယ်။ ပျော်စရာမကောင်းဘူး၊ အတွင်းမှအသံက 'ဟေ့နင်နင့်ငါပြောမယ်လို့ထင်တယ်' ဟုအော်နေသည်
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာမှစွန့်ခွာရန်ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ၊ ဘာမှမခံစားမိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည် 'Pron' အဟောင်းကိုဖြုတ်ပစ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဒုတိယအကြိမ် - ငါခံစားရတယ်၊ ငါခံစားနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိပေမဲ့ 'Pron' ဟာငါ့အတွက်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိပေမယ့်မပျော်တဲ့အိမ်ထောင်ကဲ့သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
အကြှနျုပျ၏သတိပေးချက် - သင်ထွက်သွားသည့်အခါ ... fuck ဆိုတဲ့ထွက်နေပါ။ (ငါ Godfather ကိုးကားပြုမည်မဟုတ် ;-))
ငါဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ထဲစပြီးတွေးမိတဲ့အခါဒီ site ကို ဦး ဆုံးရောက်ခဲ့ရင်ငါသိတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ရှည်လျားသောရောဂါပျောက်ကင်းပြီး 'စပ်စု' သည့်အခါဤတွင်တစ်ခုခုဖတ်ပါကသင့်ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်။ ယခုပြင်းထန်ပြီးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်ပုံ (ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့) သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအားနည်းလာသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ဘဝအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ Pron နှင့်သက်ဆိုင်သောဘဝသည်လုံးဝမဟုတ်ပါ။
(ကျွန်ုပ်အတွက်) ဒုတိယအကြိမ်သည်ပထမအကြိမ်ထက် ပို၍ ခက်ခဲပုံရသည် (ယခု ၁၀ ရက်ရှိသော်လည်းမစဉ်းစားပါနှင့် - ကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောမျှတသော ဦး နှောက်နှင့်ပိုမိုအာရုံခံစားမှုခံစားနေရကြောင်းသိသည်။ က) ကံကောင်းတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမီးလျှံအဟောင်းနဲ့ထပ်မံပါ ၀ င်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်မိဘူးလို့ထင်တယ်။
ဒီတော့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ငါတို့အားလုံး Pron ဆိုတာသိတယ်။ သူမမှာလှည့်ကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊
အသက် ၂၈ နှစ် - ၂၀၁၃ မှာ NoFap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော့်ပုံပြင်။ ဒါတွေအားလုံးဟာငရဲကိုဘယ်လိုရောက်သွားသလဲဆိုတာပါ
၆ လကြာလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာပြီး ၁၄ ရက်အကြာမှာပဲတစ်လလောက်ကြာတယ်
လူတွေအများအပြားရှည် Streak ထံမှ relapsing ပြီးနောက်တဖန်ပြန်ရတဲ့နှင့်ငါမခြွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရုန်းကန်သတင်းပို့ပါ။6လကြာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအခမဲ့ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ငါပြန်ဘဝမှာတစ်ဦးအဖျက်အင်အားစုခဲ့တဲ့အလေ့အထကိုသွားဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ထင်ရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိ, ငါသည်အပင်4ရက်ပေါင်းရောက်ရှိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမှီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာမခွဲခြား4ရက်သတ္တပတ်ကြီးနှင့်ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်4သူတစ်ဦးပြည့်စုံဆန့်ကျင်ဘက်ကြီး: ထကြွလွယ်သောနှင့်အစွန်းရောက်စိတျအပွောငျးအလဲနှင့်အတူ compulsive ။ ပုံမှန်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မှော, စိတ်ကျရောဂါနှင့်မှန်မှန်ဒီနေရာမှာအစီရင်ခံ PMOIng အပေါငျးတို့သညျအခွားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။
ဒါကြောင့် NoFap ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာခင်းအဖြစ်သာဆုံးဖြတ်ပြီး porn ကိုရံဖန်ရံခါစကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီ၊ ရံဖန်ရံခါနေ့စဉ်ပြောင်းလဲသွားသည်၊ နေ့စဉ်အကြိမ်များစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်အခြေအနေကျဆင်းသွားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျန်းမာသောအစားအစာများကိုစားရန်ကြိုးစားခြင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရ။ ငါအမြဲတမ်းငြီးငွေ့လာတယ်၊ ငါအရင်ကထက်ပိုပေါ့လာတယ်လို့ခံစားရတယ်…
အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှစကားသံကိုသတ်လိုက်သည်။ Sooooo အချိန်ပြန်စမ်းပါ၊ ကံကောင်းပါစေ၊ ငါထင်တာကဘယ်သူ့ကိုမှထပ်တူစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာကိုငါတင်လိုက်တယ်။ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တာဟာမင်းကိုနှစ်ကြိမ်ပြန်စဉ်းစားစေလိမ့်မယ်။
ငါ့ဘဝအတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့် ... ။
အရာအားလုံးကကြီးတယ်! အကျိုးကျေးဇူးများလား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသူ၊ အသစ်သောအရာများပေါင်းသင်းခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းအင်များစွာရရှိခဲ့သည်။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်စတင်; ထွက်အလုပ်လုပ်, တီထွင်ဖန်တီးမှုဖွံ့ဖြိုး, လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိ, အခြိနျပိုငျးလျှော့ချခြင်း, အမှုအရာတွေအများကြီးရတဲ့! ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာရှင်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်အာရုံစိုက်ဖို့လွယ်ကူတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံစီးဆင်းမှုအခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားရတယ်။ တစ်နေ့လုံးတစ်နေကုန်ထိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်လို့ရတယ်။ နောက်နေ့ကမဖြုန်းတီးဘဲလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏ 10 လတိုက်ပွဲစုံလင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် (reddit browsing အနည်းငယ်ကလစ်, nsfw sub နှင့်သင်ဘာလဲနောက်မှသိလား) ။ ငါထင်တာကြာပြီ after after after long after after long long long long long long long long long long long long long long long long long long OK long OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK, OK think think, think I think long long ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထပ်တူထပ်တူအဖြစ်အပျက်၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ... ထိုသဘောထားသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။
ငါဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲ ငါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကအရမ်းပြင်းလွန်းလို့ငါ (ငါ့စည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်တာ) လျှော့ချလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါအရမ်းကြောက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါလှုံ့ဆျောမှုအသစ်တစ်ခုကိုရပြီ, ယခုငါပိုပြီးအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝတယ်။ ငါ့ခရီးကအရမ်းရှည်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသွားဖို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ငါဘာကြောင့်ဒီစာကိုရေးနေတာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရမ်းပြင်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခက်ခဲပါစေနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းရိုးသားပါ၊ စွဲလမ်းမှုကိုသတိထားပြီးအပြုသဘောဆောင်ပါ။
ငါ PMO မရှိခြင်း (စိတ်မကောင်းပါဘူးငါရေတွက်တော့ဘူး) ရက်ပေါင်း 100 ကျော်နှင့်အကြီးအမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူယခုဆက်ဆံရေးအတွက်။ ငါတို့ပွေ့ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်တိုင်းအခါတိုင်းစိုက်ထူခဲ့ပေမယ့်လိင်အဘယ်သူမျှမ။ အစဉ်မပြတ်ငါမိန်းကလေးနှင့်အတူလုံးဝအဆင်ပြေဖို့လိုအပျကွောငျးအမြိုးမြိုးလမ်းမသွားမီ။
အခုမကောင်းတဲ့သတင်းသည်။ ငါ PMO'ing ကိုလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှစတင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟုခံစားခဲ့ရသည်။ နံနက်သစ်သားကိုနှိုးနေတုန်းပဲငါဟာပျောက်ကင်းသွားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝဖြစ်စေပြီးနောက်အပတ်မှာ PMO ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေချာပေါက်ညမှာညဘက်စိုက်ထူခြင်းနှင့်နံနက်သစ်သားတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးတိုးတက်မှုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ PMO မရှိတဲ့နေ့ကိုပြန်လည်စတင်လိုက်တယ်။ သတင်းကောင်းမှာယနေ့နံနက်သစ်တောသို့ငါ ပြန်၍ ထလာ၏။ ငါအချိန်ကုန်လွန်ခြင်းနှင့်ထောင်ချောက်ထဲသို့ပြန်ကျဆင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ဘူး။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ဆက်လက်နေရန်ဒီဆိုဒ်ကိုပိုမိုသွားရောက်လည်ပတ်လိမ့်မည်
ငါနောက်တဖန် PMO'ing သောအခါငါထွက်ပြေးလာသောနောက်ထပ်အရာ, ငါ့မိန်းကလေးနှင့်အတူပွေ့ဖက်သို့မဟုတ်အရသောအခါအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူခြင်းမရှိ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမစွန့်လွှတ်နိုင်တော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ရုံသက်သက်ပြန်လာပြီဆိုတာငါကြောက်တယ်။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ဤတိုက်ပွဲတွင်လူတိုင်းအားကောင်းနေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါသည်ဤမိခင် fucker စည်းချက်ခဲ့စဉ်းစားမိတယ်။ ဘုရားသခငျသညျငါမှားသူကပြောတယ်
ငါသည်ငါ့ 90 ရက်ပေါင်းကိုပြု၏။ အပေါ် Trudged နှင့် 150 ကိုပြု၏။ အကြှနျုပျ၏ fuck ဆိုတဲ့ဘဝကိုငါ့မျက်မှောက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခဲ့သည်။ ငါ၏အရည်းစားနဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်မွေးဖွား။ သူကကျွန်မကိုယုံကြည်စိတ်ချနဲ့ကျွန်မတတ်နိုင်သမျှထင်ဘယ်တော့မှနည်းလမ်းတွေ၌ငါ့ကိုလေးစား။ ငါချစ်နဲ့ကျွန်မတတ်နိုင်သမျှထင်ဘယ်တော့မှနည်းလမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစား။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်လို့ခံစားရတယ် ငါဒီအမေကိုအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်ရန်အာရုံစိုက်လွန်းသောစွမ်းအင်များစွာသုံးစွဲနေသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်ကို ဖျက်၍ ဖျက်လိုက်သည်။ သီတင်းပတ်ကုန်ရက်တွေတလျှောက်လုံးအချိန်တွေကုန်လွန်သွားတဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါငါကုထုံးကိုမရပ်တော့ဘူး။ ငါအုပ်စုဖွဲ့ကုထုံးမသွားတော့ဘူး။ ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်ကိုလုပ်နေတာတော့ဘူး။ ငါပြန်လာ ငါနောက်တစ်ခါပြန်သွား ငါပြီးခဲ့သည့်လအတွက်တနင်္ဂနွေတိုင်းပြန်သွားပြီ
ငါချော်တယ် ငါကအားလုံးကိုပစ်တယ်။ ငါသည်ငါ့ဟောင်းနွမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပြန်လာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ၏အအလားအလာ၏တစ် ဦး ကအစိတ်အပိုင်း။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သူတစ်စုံတစ်ယောက်။ ယုံကြည်မှုမရှိဘူး အခြားသူများကိုမှာထုတ် Lashing ။ လိမ်။ ကိုင်တွယ်။
ကျွန်တော်ဒါကိုနောက်တဖန်မလုပ်နိုင်ပါဘူး ပြန်လာပြီ ငါအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့မနက်တိုင်းဒီနေရာမှာရောက်မယ်။ ငါ့ကောင်တာ reset ငါနေ့တိုင်းofန္ဒြေစောင့်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုထပ်မံတန်ဖိုးထားချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်မကောင်းစရာအလုပ်အချိန်ဇယားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကုထုံးဆရာနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်မရှိသေးပါ၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သူမကိုလျစ်လျူရှုမည့်အစားသူမ၏အီးမေးလ်များကိုပြန်ပြောတော့မည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတစ်ခုခုကိုငါရှာမယ်။
ငါသည်ဤလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ငါတိုက်ပွဲများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ငါကကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပေမယ့်ငါမှားခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ရန်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
ကောင်းပြီယောက်ျားတွေ၊ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့ကောင်မလေးနဲ့နွေရာသီတစ်ခုလုံးကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ နှစ်လအတွင်းတွင်သူမနေထိုင်ရာအရပ်သို့သူပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ ငါသူမနှင့်အတူနေ့တိုင်းစာသားနီးပါးနီးပါးနေခဲ့ပြီးပြီ, ငါလုံးဝဆိုလိုတာကငါလုံးဝဆိုလိုတာက, ငါ့ထံမှ ED ကြာမြင့်စွာ porn ထံမှဝေးနေပြီးနောက်။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံ ၅ ရက်အထိတီးခတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူစွာစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး အပြစ်မဲ့အနမ်းနှင့်စန်း! သင်ခက်ခဲကြောင်းသိသောနောက်အရာတစ်ခု!
ငါရည်းစားနဲ့ဝေးရာတစ်ပတ်ခွဲလောက်ရောက်နေပြီ။ ကြောက်စရာကောင်းတာကလိင်ကိစ္စမရှိဘဲငါဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တ ၀ က်မှာလေးကြိမ်ပြန်လုပ်မိခဲ့တယ်။ ငါကြိုးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့လိင်မပါဘဲ၊ ငါ့စိတ်အခုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ငါဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသကဲ့သို့ယခုငရဲအဖြစ်ကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါပြန်လာခဲ့တာပေါ့ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က nofap ကို ၃ လခန့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းဆုံးနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်အချို့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံရမည်။ ငါသည်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ကျောင်းသို့ပြန်။ , ထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တသမတ်တည်းအခြေခံပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်း၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသစ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ လအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေကိုပြန်ကျင့်သုံးပြီးအရာရာတိုင်းကနေဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကို အခြေခံ၍“ တစ်ခုတည်း” မထားသည့်ဘဝ၏တန်ဖိုးကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားရန် ၉ လခန့်ကြာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဝါသနာများနှင့်အလုပ်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းလိင်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအပေါ်မှီခိုရခြင်းကြောင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်အားလုံးလုံးမပေးနိုင်ပါ။ ငါအမြဲတမ်းဒီအရာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်၊ မင်းအရင်ကငါ့အတွက်အရမ်းအံ့သြခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်မင်းတို့ကောင်လေးဆီကိုငါပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ ငါဒီတစ်ခုတည်းကိုမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ နောက်ပြီးမင်းရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ငါ့ရဲ့လည်ပင်းတစ်ဝိုက်မှာ ၁၅ နှစ်ကြာကြိုးဆွဲချခဲ့တဲ့လိင်စွဲလမ်းမှုနဂါးကိုအနိုင်ရိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
ထိုအခါငါ porn စွဲကရှင်းပြသည်သော TEDx ကဗီဒီယိုပေါ်သို့လဲ။ မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုငါ့ကိုအထိဖွင့်လှစ်တူသောကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါထိုနေ့ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တဦးတည်း relapse မရှိဘဲတစ်နှစ်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထိုသို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ၏အစိတ်ကျသှားငါသည်ငါ့အလုပ်မှာပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်ငါအိပ်ရာထဲကပိုမိုလွယ်ကူတယ်, etc, ဖတ်ရှုခြင်း, အားကစားပေါ်တက်ခူးငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စတင်ငါလွှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်လအကြာတွင်တော်တော်ဝေးနထေိုငျခဲ့ကွောငျးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေ့ရှိခဲ့ chatting နှင့်နောက်ကျောနှင့်ရှေ့ဆက် email ပို့စရာ၏သူမရဲ့နှင့်အတူတနင်္ဂနွေလာနှင့်သုံးဖြုန်းဖို့ငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးကျွန်မအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်မယ်လို့ခဲ့ပေမယ့်ငါရှိဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့3နေ့ရက်ကာလအဘို့ (တစ်ခါတစ်ရံနှစ်ကြိမ်) လိင်နေ့စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြောင့်အကွာအဝေးတစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်နိုင်သမျှမဟုတျကွောငျးသဘောတူညီခဲ့နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးပျော်စရာတနင်္ဂနွေမှာထားခဲ့တယ်။
လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်မအနီးအနားရှိမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တော်တော်လေးအစာရှောင်ခြင်းချိတ်ဆက်နှင့်သူမအိပ်ခန်းထဲမှာအလွန်ပွင့်လင်းစိတ်ထားခဲ့ငါ့အံ့အားသင့်ဖို့။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုမလုံခြုံစေဘဲနောက်ကွယ်မှာမကျချင်ခဲ့ဘူး။ ငါဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ED ကိုရှင်းပြတယ်၊ သူကငါ့ကိုယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ပေးဖို့ Viagra ဆေးပြား ၄ လုံးကိုနမူနာပေးခဲ့တယ်။ ငါ Viagra အပေါ်သံသယဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခါငါတစ်ဝက်ဆေးလုံးကိုယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လိင်အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ ဒါအားလုံးမှားသွားတယ်နေရာဖြစ်သည်။
ကျွန်မရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက် (Viagra ကိုဘယ်တော့မှမသုံးခဲ့ဘူး) ကျွန်မဟာညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုပြီးတဲ့အခါတစ်ယောက်တည်းရှိနေခဲ့တယ်။ Viagra နဲ့ကောင်မလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ED သေချာပေါက်ထွက်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်ကမာရ်နတ်က“ မင်းတို့တစ်နှစ်ကျော်လောက်သန့်ရှင်းနေပြီ၊ တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ ” ဒီတော့ငါလုပ်ခဲ့တယ် အဲဒါကိုကျွန်တော်မသိခင်မှာ TEDx ဗီဒီယိုမတိုင်မီလွန်ခဲ့တဲ့ ၁.၅ နှစ်တုန်းကငါပြန်လာခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ဓာတ်ကျပြန်လာ, ငါ့အလုပ် sloppy ရတဲ့ခဲ့သည်။ ငါနောက်ကျောစတုရန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-1.5/age-1-ed-depression-went-away-more-successful-at-my-job-and-relapse/
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိပ်ရာမှထ။ အားကစားခန်းမသို့သွားပြီးနောက်ယနေ့နံနက်နှစ်ခါပြန်ရသွားသည်။ ငါ porsche boxter မောင်းထုတ်ရန်စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး, ငါ့တိုက်ခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်ငါမူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ အရောင်းကောင်လေးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုလုံးသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးသည်။ ငါကများသောအားဖြင့်လူမှုဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါ။ တစ်ချိန်လုံးစိတ်ရှုပ်စရာမလိုဘဲ ၅ မြန်နှုန်းကိုကျွန်တော်မမောင်းနိုင်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိကား (audi tt) တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလက်စွဲကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်။
ငါဒီစာရိုက်တာကိုရေးနေတုန်းပဲငါ့အတွေးဖြစ်စဉ်ဟာလုံးဝကွဲပြားတယ်။ ငါ့စကားလုံးတွေအားလုံးဟာအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လိုက်နေတယ်၊ ​​ငါပုံမှန်စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကိုပြန်ပြုပြင်ဖို့လည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ကြည့်ခြင်းများကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝသည်မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ဘယ်တော့မှ RELAPSE ဘူး။ Fuck ဒီမြူနည်းနည်းရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမနက်ဖြန်မစောင့်နိုင်တော့ပါ4 ရက်ပတ်လုံး
2011 ခုနှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး post ကိုတကယ်ငါ့အဘို့ကတက်ချုပ်ဖော်ပြ။ ငါကပဲပြန်ဖတ်ပါ။ အအေးကြက်ဆင်ကိုသွားပြီးပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုခံစားပြီးတဲ့နောက် PMO ကိုကျိန်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာငါဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ED ED ပြissuesနာတွေနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်။ မှတ်စု: လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိပေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, Porn ဝမ်းနည်းစွာငါ့အဘို့ထိုအသက်ကယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အရင်ကလောက်မပြင်းထန်သော်လည်းမလွယ်ကူသေးပါ။ ထိုအခါငါနှင့်စျေးပေါအရည်ကိုအခြေခံပြီး Viagra မှမိတ်ဆက်ပေးသောပြည်ပမှခရီးစဉ်သို့ရောက်။ နောက်တဖန်ငါနှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် ED နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှ ဦး ခေါင်းမှငါထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ နှစ်သာရှိသေးသော်လည်းထိုအရာများကိုမှီခိုရန်မလိုအပ်ပါ။
ငါ့အတွက်အဓိကအရာကငါစိုက်ထူလိုက်ပြီဆိုရင်တောင်ငါသိပ်မခံစားရဘူး။ ကိုယ့်ချိုချဉ်မခံစားရဘူး ငါလေးလေးနက်နက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ PMO ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာပြန်ယူပြီးပုံမှန်ခံစားဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ငါသည်ဤအချိန်ကောင်းသောအဘို့ဤအရာကန်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး ကပြိုလဲဝါရင့်ရဲ့ပုံပြင်နှင့်မှောင်မိုက်ဘက်သို့ငါပြန်လာပြီးနောက်အချို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်
ငါနောက်ကျောစက်တင်ဘာ 2012 ၌ငါ့ပထမဦးဆုံး Streak စတင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပါပေါ်မှ 90 ရက်ပေါင်းခက်ခဲ mode ကို ပြု. , nofap ၏ထောမသီဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာဘဝကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါ 90 နေ့ကအမှတ်အသားန်းကျင်ရှိခဲ့စွမ်းအင်နှင့်ယုံကြည်မှု၏ပမာဏအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်လအနည်းငယ်ကုန်လွန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Porn ကကျွန်တော့်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် skimpy အင်္ကျီတွေဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကသေချာတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ငါ Netflix ကို B ဇာတ်ကားတွေမှာအသားအရေနည်းနည်းပြနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါက porn မဟုတ်လား ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မထိ, ဒါကြောင့်အိုကေရဲ့လား
ဒီခေါင်းနှစ်လုံးသည်အဘယ်မှာရှိသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာတဖြည်းဖြည်းတစ်လအကြာအကြောင်းကိုစတင်ငါခါတိုင်းလိုမျိုးစုံနာရီမူးရူးအစည်းအဝေးများနှင့်အတူအကြိမ်အနည်းငယ်တစ်ပါတ် fapping ငါ၏အလေ့အကျင့်သို့လမ်းအများဆုံးပြိုလဲခဲ့ရှိရာအမှတ်, ငါ့တိုးတက်မှုမှာကွာ chip တစ်ခုလကိုယူ။ သေရော။ ခုနစ်လ, လူ။
သငျသညျယခုနှစ်အစောပိုင်းကထံမှငါ့ပို့စ်များကိုပြန်ကြည့်လျှင်, ငါသည်ဤပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုငါဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့စကားပြောနှင့်ငါအလေးအနက်ထားသည်ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲငါတကယ်မသိဘူး။ အလုပ်နှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားနည်းနေလိမ့်မည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သောကြောင့်ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ရိုးရှင်းသောဆုံးရှုံးမှုနှင့်အကျင့်ဟောင်းများသို့ပြန်ကျသွားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒီအတွေ့အကြုံအတွက်အကောင်းမြင်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ရင်၊ ငါဟာ ABA နဲ့လုံးဝမတူပဲဘဝကို ABA နှိုင်းယှဉ်ချက်အရကောင်းပြီ။
ကျွန်တော့်ဘဝကိုဆက်ပြီးထိန်းထားဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါနုတ်ထွက်ဖို့ယနေ့အသစ်တဖန်အားထုတ်မှုကိုစတင်တာပါ။ ငါဖော်ပြရန်တစ်ခုမှာအရာခဲယဉ်း mode ကိုဖြစ်ပါတယ် ဤမျှလောက်လွယ်ကူစေရန် လွယ်ကူသော mode ကိုထက်။
Reboot လုပ်သွား, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ချိတ်ဆက်တယ်။ Completed ဒုတိယ reboot
၁၉ နှစ် - NoFap နဲ့ငါ့စမ်းသပ်ချက်။ ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
အာ့ ရက်ပေါင်း ၃၁၈ ရက်အကြာမှာငါစတင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်မ nofap စတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါရည်းစားရရန်ယုံကြည်မှုနှင့်စွမ်းအင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ကြီး
မနေ့ညကငါတို့လမ်းခွဲခဲ့တယ် သူမကသူမလို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ဆီသို့ငါ fuck ဆိုတဲ့စနေနေ့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့အရင်တုန်းကလိုလိင်မဆက်ဆံခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရေချိုးခန်းထဲမှာအိပ်ခဲ့ရတယ်၊ သူအိပ်နေတုန်းဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုရှိနေတုန်းပဲ။
ထိုအခါငါ porn အချို့ချင်တယ်, ဒါကြောင့်ငါအချို့ကြည့်ရှု, ငါကခဏဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းနှင့်ငါစွဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ် ငါမနေ့က 4,5ကြိမ်တူ wanked ငါတဖန်ထပ်မံအရှုံးသမားကဲ့သို့ခံစားရတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျနော် 20lbs ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မံဆေးလိပ်သောက်စတင်ခဲ့သည်။
ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့။ တဖန်ငါအတူတူငါ့အသက်ကိုရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသာ 1 လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွက် shit ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ porn ကိုဓာတ်မတည်အဖြစ်, မြေပဲဓာတ်မတည်ကဲ့သို့စဉ်းစား။ မြေပဲနှင့်ဓာတ်မတည့်သူတစ် ဦး အတွက်မြေပဲသည်“ မကောင်း” သို့မဟုတ်“ မကောင်းသော” အရာများမဟုတ်ပါ၊ သူမပြောနိုင်သည့်အရာသာဖြစ်ပြီးအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဓာတ်မတည့်သူသည်၎င်းကိုလက်ခံသည်။ ညစာစားပွဲတစ်ခုမှာသူတို့သူငယ်ချင်းတွေကမြေပဲကိုစားကြတဲ့အခါသူတို့သူငယ်ချင်းတွေကိုမနာလိုတာ၊ သူတို့ကပဲမြေပဲနဲ့သဟဇာတမဟုတ်ရုံလက်ခံခဲ့သည်ပါပြီ။
ဒါဟာ porn နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းမှုကိုမရရှိနိုင်သည့်အပြင်အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြု၍ ရနိုင်သူများလည်းရှိသည်။ ငါကသူတို့ကိုပိုမိုပါဝါကဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့မူးယစ်ဆေးစွဲသူတွေအတွက်ငါတို့နဲ့ porn ဟာသဟဇာတမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကျိုးဆက်များရှိသည်။ ဒါကိုလက်ခံပြီးငါတို့ဘ ၀ ကိုဆက်လုပ်ရမယ်။
အရာအားလုံးဆင်းသွား, သေးသငျသညျ nofap သငျသညျကိုကယျတငျနိုငျသိကြကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတဲ့အခါ။
ငါ ED နှင့်အတူတစ်နှစ်ခန့်ရုန်းကန်နေခဲ့ကြရတယ်၊ အချို့သောသင်ဖော်ပြခဲ့သောအလွန်များပြားသောစူပါအင်အားကြီးများကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကာ၊ သို့သျောလညျး, ငါနေဆဲသည်သူ၏ TEDx ဟောပြောချက်မှာ Gary Wilson ကပြောသည်ကိုယုံကြည်ခဲ့တယျ။ သို့သော်အမြဲတမ်းဆင်ခြေပေးပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာယခုလုပ်ရန်သွားလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လက ၂၃ ရက်လောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမကြည့်ဘဲသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော့်ငပဲပြန်ရှင်လာလို့ပါ။
ငါအခါအားလျော်စွာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်ရိုက်နှက်နေသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ အဲ့ဒီ ၂၃ ရက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော့်ငပဲဟာနောက်တစ်ခါခံစားလာရတယ်။ သို့သော်ယခုတွင်ငါသည်ညစ်ညမ်းသောပုံနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဆင်ခြေထပ်မံတွေ့ရှိပြီးနောက် ၄ ရက်တွင်မှသာဖြစ်သည်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်အံ့ and ဖွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးနှင့်အတူရှိနေသော်လည်းသူမအတွက်ခက်ခဲသောကြောင့်ငါကြောက်လန့်နေသည်။ ငါခဲယဉ်းတယ်ဒါပေမယ့်မလုံလောက်ဘူး
ငါဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ငါတကယ်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားပြီ။ ကျွန်မတို့ကသင့်လျော်သောလိင်မဆက်ဆံမီအချိန်အနည်းငယ်ကြာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအတွင်း၌ဖျက်ဆီးပစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသင့်တာကိုတောင်မလုပ်နိုင်ရင်ငါဘယ်လိုအသုံးချမလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကဆရာ ၀ န်ဆီသွားခဲ့တယ်။ သူကအရာရာအားလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ ငါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ testosterone ဟော်မုန်းတွေတောင်မှတက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကသူငယ်ချင်းတွေအားလုံး fucking လုပ်နိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာနေဖို့လိုတယ် ငါ့ဆီမှ။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုတကယ်သတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့်အကြံဥာဏ်တွေ၊ ထောက်ခံမှုတွေအားလုံးကိုအရမ်းသဘောကျမှာပဲ။
ငါသိပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်တယ်၊ ငါဒါကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောနိုင်တယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့တာနဲ့အနည်းဆုံးခဏတစ်ဖြုတ်မကြည့်မိဖို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ မကြာမီကျွန်ုပ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကိုမည်သို့ပြန်ရနိုင်မည်နည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမဖျက်ဆီးလိုပါ။
၉ ရက်သတ္တပတ်၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားထုတ်မှုသည်အလျင်အမြန်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ - ဆိုးခြင်း - Edging၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ED ပြproblemsနာများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း - ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုနှေးကွေးစေသည်။ ထိုအခါငါအင်တာနက်နှင့်အတူ filtering အစီအစဉ်များနှင့်အတူအိမ်တအိမ်မှာလက်တွေ့ကျကျတစ် ဦး တည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အချင်းလူ၊
နေ့စဉ် ၂-၃ ကြိမ်၊ တစ်နေ့ ၂-၃ ကြိမ်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသည့်အရာမှာအိမ်သို့ပြန်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စစ်ထုတ်စက်များကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်တစ်ပတ်ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ငါထွက်သွားရန်, လူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်, ငါ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိစ္စရပ်များဂရုစိုက်ဖို့ကြောက်ခဲ့သည်။ ဒီ ၁၀ ရက်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုကျွန်တော်ပြန်မစခင်ကျွန်တော့်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စေခဲ့တယ်။
နိဂုံးချုပ်? Reboot ကရှည်လျားပြီးခက်ခဲပါတယ်။ သငျသညျပြန်သွားလျှင်, သင်ပြန်ယူပါ။ ငါအပတ် 20 အကြာပြုသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, reboot အသစ်ကနောက်ဆုံးသောကာလထက်ပိုမြန်သွားသည်။ ၂ ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံး ၃.၅ ရက်ကြာအောင်ရှေ့ဆက်နိုင်မယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
(Porn သွေးဆောင် ED၊ ရက်ပေါင်း ၅၀ PMO မရှိ၊ ရက်အနည်းငယ်ပြန်လည်သက်သာသွားသည်) ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရာထူးပြီးနောက်ငါ PMO မပါဘဲနောက်ထပ် ၂ ပတ်ကြာသွားသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အရမ်းကောင်းတယ် ငါ ED / abstaining / rebooting ဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, ငါသည်လည်းခံစားခဲ့ရသည် Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု မကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်။ ငါကအောက်ပါနေ့ရက်ကို P ကိုကြည့်စတင်အကြောင်းကို7နေ့ရက်ကာလအဘို့ binged ။ ငါပြောင်းလဲမှုများအတွက်သင့်လျော်သောစိုက်ထူနှင့်အတူ M ကနိုင်ဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ငါတစ်နေ့တစ်ကြိမ်စတင်ခဲ့ပြီး2ကြိမ်သို့ ဦး တည်ခဲ့ပြီး2ရက်တွင်ငါသွားခဲ့သည်။ 3. ငါအလျင်အမြန်တိုးပွားလာခဲ့သည် (P ကြီးမားသော P စုဆောင်းမှုကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာစုဆောင်းခဲ့သည်ကိုရူးသွပ် (၁၀၀ ဂစ်ဂါးစ်များ) ။ ငါလုပ်သောတိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်ငါပဲအချို့သောအဆင့်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး
ငါနောက်ဆုံးတော့ရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကွန်ပြူတာဖိုင်တွေကိုမြန်မြန်ဖျက်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ အခု ၃ ရက်နေပါပြီ။ ငါ3ရက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်စတင်ခဲ့သည်။
ဒီကနေငါကျပန်း PMOer မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့သည် ဒါဟာအပြည့်အဝစွဲချချောဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကိုကြည့်ပါ။ ပြားချပ်ချပ်ပြားကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောအဆင်မပြေမှုနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုများ (စိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ နာကျင်မှုဝေဒနာများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ) သည်ကျွန်ုပ်ထပ်မံတွေ့ကြုံခံစားလိုသောအရာမဟုတ်ပါ။ PMO သည်ပွဲစားတစ်လမ်းသာလက်မှတ်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အပြည့်အ ၀ သတိထားမိသည်။
PMO ကိုအချိန်အများကြီးမပေးချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကျူးလွန်မိသောအပြစ် / မလုံခြုံ / သမာဓိဆုံးရှုံးမှုကိုမခံစားလိုပါ။ ငါလှည်းပေါ်ပြန်လာတယ်
ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ PIED တယ်
ဒီအတွေ့အကြုံကငါ့ကို PMO ကိုအမြဲတမ်းကြောက်လန့်စေတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက်အကျိုးကိုမရရှိနိုင်ဘူး၊ ဒါက fuck ဆိုတဲ့အရခက်တယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်သနားစရာကောင်းပြီးရှက်စရာကောင်းတယ်၊ လူတစ်ယောက်လိုတော့မခံစားရတော့ဘူး၊ တကယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ PIED ဟာကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ၈ နှစ်အရွယ်နဲ့တူတဲ့အခါမှားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားစွာရှုမြင်သည်။ ရှည်လျားသောလမ်းများတည်ဆောက်ခြင်းသည်မည်မျှအကျိုးရှိသည်ကိုငါသဘောပေါက်သည်။
ငါ PMO လုပ်တဲ့အခါငါလုံးဝမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ပါ။ လတွေမလန့်တော့ဘူး။ PMO နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု၏အန္တရာယ်များကိုသတိရပါ၊ သူတို့အလွန်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံမှန်ပြန်မရောက်မချင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကနေခဏထွက်ခွာဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါကငါအရမ်းစိတ်မကောင်းစရာပဲ၊ အခုငါ့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ကဘယ်လောက်နည်းနေပြီလဲ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာဘိန်းဖြူစွဲနေသူလိုငါခံစားရတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားမည်သည့်အခါကမျှမပြောပါစေနှင့်။ ဒါကလူအများစုယုံကြည်တဲ့ bullshit တစည်းပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏သနားစရာဇာတ်လမ်းကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး NoFap နှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ယုံကြည်ချက်ကိုအားဖြည့်ပေးပါစေ။
PMO ကိုရှောင်ကြဉ်သည့် ၈၇ ရက်တွင်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများအားကျွန်ုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်အလွန်တိုးတက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာရရှိခဲ့သောအပျော်ရွှင်ဆုံးကာလများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှစ် ဦး စလုံးခံစားနေရပြီးနှင့်အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေသည်အဘယ်အရာကိုနားမလည်ခြင်းမရှိဘဲ 87-6 နှစ်ကြာနှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါမိန်းကလေးကနေစိုက်ထူခြင်းနှင့်အများကြီးလှုံ့ဆော်မှုရရန်အဘို့အဒါဟာအစဉ်အမြဲကြာလိမ့်မယ်, ထို့နောက်ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်အဘို့အပြည့်အဝစိုက်ထူရနိုင်ခဲ့လျှင်ငါမပြီးဆုံးမီစာသားအစဉ်အမြဲကြာရှည်လိမ့်မယ်, ငါ7မိနစ်ကဲ့သို့ပြောနေတာပေါင်း ။
၈၇ ရက်အကြာမှာငါစိုက်ထူမှုမြန်မြန်ရခဲ့တယ်၊ လိင်ကိစ္စဟာပုံမှန် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်အထိကြာသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့အလွန်ကောင်းသည်ဟုဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာအတင်းအဓမ္မမလုပ်ပဲ၊ ငါလုပ်တာ၊ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး၊ သဘာဝပဲ၊ ပျော်စရာပဲ။ ၈၇ နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% ကုသမှုမခံရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်လုံလောက်သည်။ တစ်လအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၁၀၀% ကုသသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါလာမယ့်လကျော်ကမိန်းကလေးနဲ့အကြိမ်အနည်းငယ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကရေတိုဆက်ဆံရေးပဲဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကရေရှည်အရာလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကိုကလစ်မပြုခဲ့, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဖျက်သိမ်း, ငါ့သဘောကျခဲ့သည်။
ထိုနောက်မှငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နောက်တဖန် masturbating start ပါစေဖို့ဆုံးဖြတ်ပေမယ့်တစ်ခါသာတစ်ပတ်ကို, သာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အလက်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ (ငါကဒီမှာစတင်မတိုင်မီကိုယ်လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့ဖူးဘူးလိမ့်မယ်တစ်ခုခု) ကို
ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော့်ဘဝမှာဆိုးဝါးတဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်မိဘတစ် ဦး မှာအသည်းကင်ဆာရောဂါရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားနေသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအဖြစ်မှန်အသစ်ကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ခွာဖို့ porn နဲ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ငါတစ်လကျော်ပျမ်းမျှတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငရဲကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါမရှိဘဲညအချိန်တွင်မည်သို့အိပ်ပျော်သွားမည်ကိုငါမသိ။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွေပြန်စလာတဲ့အခါငါဒီ site ကိုပထမ ဦး ဆုံးရောက်သွားတဲ့တူညီတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစတင်ခံစားနေရပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားသည်။
ငါ PMO အခမဲ့ပြီးခဲ့သည့် 8 ရက်များအတွက်ယခုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ ငါအရင်ကလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါဒီအချိန်ပြန်ကောင်းလာမယ်သေချာတယ် ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးပြီလို့ထင်တယ် ငါစပြီးတခါငါအငွေ့ပျံသွားလိမ့်မယ်ကြောက်တယ် ဒါဟာအရက်တစ်ချိန်ကဘီယာမသောက်နိုင်တော့တဲ့သဘောပဲ။
(ဤကောင်လေးသည်အလယ်လမ်းကိုရှာမရသေးပါ) အဘယ်ကြောင့် 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုယူတာပဲ!
150 လက်ထက် မှစ.0ရန်။ အဘယ်သို့ငါသတိထားမိပါပွီ။
nofap တိုးမြှင်တစ်ခုမှာကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုပုံမှန်အားကစားရုံတက်ရောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမမေးလျှင်, ဤဖြစ်ကောင်းအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကြောင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူများစွာသောလူမှုရေး interaction ကမှတစ်လအကြာအားကစားရုံတက်တော့ဘူးခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က mmorpg အသစ်အတွက် 7days key ရရှိသည်။ စားခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ဟုတ်တယ် ပျင်းစရာကောင်းတာကငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်မှမတွေးဘဲမေ့သွားသည်။ ငါ nofap pre- ကဲ့သို့တစ်နေ့လျှင် ၃-၄ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဘုရားသည်ထိုအရာကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်အတွက်။ ပထမ ဦး ဆုံးငါ "ok ဒီအမှန်တကယ်တော်တော်လေး ok ပါပဲ, ငါ nofap ရုံရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်" ကဲ့သို့ဖြစ်၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်ကာလပေမယ့်ယခုရက်အနည်းငယ်စုံတွဲအပြီးတွင်ငါရုံ REAL ဘယ်လောက် fuck ဆိုတဲ့ဘယ်လောက် fuck ဆိုတဲ့သတိထားမိ။ ငါယခုခြားနားချက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့် ပို၍ တူသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောဆိုရန်မဟုတ်၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာပြောရမှန်းမသိပါ။ လူတစ်ယောက်လား။ ဒီဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာမဖြစ်နိုင်ပါ
yersterday ကတည်းကတဖန်ငါ nofap အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လည်းအားကစားရုံမြားတကျရောကျ။ ငါသညျဤအထဲကရခဲ့ကြရတယ်။ Nofap + အားကစားရုံအသက်ပေတည်း။
အသက် ၁၇ [နေရာရွှေ့ပြောင်း။ မရပါ]
ကျွန်ုပ်သည်အမှောင်တွင်းထဲရောက်နေပြီးမိမိကိုယ်ကိုမလှုံ့ဆော်နိုင်ပါ။ ငါသွားပြီဟုခံစားမိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်ပြန်လာသည် (သို့သော် PMO ကိုရပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လုံလောက်မှုမရှိ)၊ ငါအချို့သောကိုယ်အလေးချိန်တက်သည် (သို့သော် PMO ကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်အားလှုံ့ဆော်ရန်လုံလောက်မှုမရှိ)၊ ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များမှာပိုမိုတောက်ပနေပြီးအသားအရေလည်းကျဆင်းလာသည်။ ပိုဆိုးသည် (PMO ကိုရပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်မလုံလောက်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းပါသည် (သို့သော်မလွယ်ကူပါ……)
လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါလား။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံး abstinence Streak တွင် ED, chubby၊ unconfident etc စသည်တို့မှကောင်းသောစိုက်ထူခြင်းသို့သွားသည်။ ငါနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပိုဆိုးလာပေမယ့်ငါ့ကိုအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုမောင်းထုတ်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။
ငါ porn ပြန်လည်နာလန်ထူက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖတ်ခြင်းနှင့် post '' ချင် 'တော့ဘူး
ယောက်ျားတွေ, ငါမကောင်းတဲ့တက် messed ။ နှစ်နှစ်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်စမိတယ်။ အခုတော့ငါစတုရန်းတစ်ကွက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ။ PIED၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ငါမဖြစ်ဘူး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကငါလေယာဉ်ပျံတက်လာတယ် ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့သာမန်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးသဘာဝရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ နောက်တဖန် PIED မရှိ, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, တန်ဖိုးမရှိခံစားမှုမရှိတော့ပါ။ ငါမထနိုင်တော့သည့်အခါစိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ အားလုံးကြောင်းကင်လုပ်ခိုင်းအတိတ်၌ရှိ၏။ သွားပြီ
ငါအခြားတိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်မိန်းမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝိညာဏအဆင့်တွင်အပါအဝင်အံ့သြဖွယ်ကျေနပ်စရာ။ ငါက Homo Sapiensလူအပေါင်းတို့ဘဝ (သို့မဟုတ်အများဆုံးဘဝအနည်းဆုံး) နှင့်ဆက်ဆံရာရာကိုးကှယျမှုတစ်ခုလုပ်ရပ်အတွက်စေ့စပ်။ ဘယ်လိုရယ်စရာ porn သလိုပဲ! ဘယ်လိုအသေးစိတ်နှင့်လိုက်တယ်, ဘယ်လို ကန့်သတ်, စိတ်ကူးနှင့်အတု!
တစျနေ့တိုင်အောင်ငါ twerking ကြီးတွေ Butt နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုမျှော်ကြည့်။ ကောင်းပါတယ်ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုပြောသည်။ သူတို့ဝတ်ဆင်ထားတယ်။ ဒါကတကယ်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်မဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကျွန်တော့်အရသာဟောင်းမှ စ၍ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုအလားတူဆိုးကျိုးများသက်ရောက်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုငါနေထိုင်သောတိုင်းပြည် (တကယ်တော့တိုက်ကြီးတစ်ခုလုံး) သည်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းခံရသည် ဒါကငါ့ရဲ့အရာပဲ။ ဒါဟာတကယ်တော့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ (သို့မဟုတ်ဒီတော့ငါထင်) ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေစေတော်မူ၏။
ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးဆက်လက်ဒါပေမယ့်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်စတင်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲကျွန်မပြန် PMO သံသရာ၌ရှိ၏။ ဒါညစ်ညမ်းမဟုတ်ဘူး! ငါဆေးလိပ်သောက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့တစ်နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောမိတယ်။
လတွေကုန်လွန်လာတယ်။ သစ်ပင်တွေအတွက်ထင်းမကြည့်ဘူး အဲဒါကွဲပြားပါတယ်။ ငါ nudity ပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစကြည့်တဲ့အခါတောင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ပါ၊ ပြီးတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရပင် porn အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမယ့်ဗီဒီယိုများ။
Long ကပုံပြင်တိုတို, ငါ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မတစ်ချိုးသွားလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးဟာလအနည်းငယ်အဘို့အတင်းမာခဲ့နှင့်မျှမတို့သံသယငါ၏အသက်တမ်းတိုး porn အလေ့အထကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကိုယျ့ကိုယျကိုကိုအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအချိန်ယူပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကကျွန်မအလုပ်ခရီးစဉ်အပေါ်အကြီးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်တဦးတည်းအရာသည်အခြားမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သငျသညျဖြစ်ပျက်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ တိုးတက်မှုအားလုံးသည်ထိုနှစျမြားဘာမျှမထိုက်တန်ခဲ့သညျ။ ကျွန်မစိုးရိမ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နောက်တဖန်, အလျော့အတူတအချိန်လေးဝေးမျက်ရည်ကနေဒစ်ခြေချင်းခတ်တာပါပဲ။ ငါသူ့အဘို့ကိုအခြားအမှုအရာလုပ်နေတာကတက်သည်ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားစဉ်ကထုံနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်, ငါ့ခြေထောက်အကြားရှိထိုင်တော်မူ၏။ အတွေး-ပုံစံများ၏အကျွမ်းတဝင်သံသရာ re-ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အရှက်, အဒေါသ, သာအရာရာကိုပိုဆိုးဖွဲ့သောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်။
တစ်နှစ်ခွဲလောက်အတွင်းမှာကျွန်မကြိုးစားခဲ့သမျှကိုပြန်ပြီးဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတောင်ရဲ့အောက်ခြေကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ရှေးအချိန်ကလိုတောင်ထိပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု - အားလုံးလွှင့်ပစ်ခံလိုက်ရသည်။ ဒီတော့ငါ့အမှားမလုပ်နဲ့ မှားယွင်းသောလုံခြုံစိတ်ချရသောအသိဖြင့်မမှီပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုတွေဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ်၊ သူတို့စိတ်ထဲပြန်ဝင်လာအောင်သူတို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့သစ် ၁ ဖြစ်သည်။
ငါလုံးဝပြုလုပ်မှုတ်။ ကျွန်မကအားလုံးကိုခဲ့, ငါကဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤတွင် nofap ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲနှင့်မည်သို့ရှိသမျှတို့ကိုငါကျော်နောက်တဖန်စတင်ရန်ရရှိပါသည်ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကငါ nofap ကိုအလေးအနက်ထားတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင် ၇ ရက်ကျော်ပြီ။ ငါ့အိမ်နဲ့ငါ့ဖုန်းမရှိဘဲတစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်အထိငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေဖုန်းတွေငှားတယ်။ မည်သည့်အာရုံထွေပြားမှုမှမရှိဘဲငါ ၁၀ ရက်လုပ်ခဲ့သည်။
ကြောင်းကနဦးရဲ့အောင်မြင်မှုပြီးနောက်ငါ 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့သွား၏။ ရလဒ်အံ့ဖှယျရှိကြ၏။ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရ 35 ကြောင်းနွေရာသီ POUNDS, လှပတဲ့မိန်းကလေးကိုမြင်လျှင်စတင်နီးပါးတစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ညရပ်တည်ချက်နှင့်အတူထားကြ၏တယ်။ အဆိုပါစူပါအင်အားကြီးအလွန်မှန်ကန်ခံစားရတယ်။ ပြီးနောက် Flat-တန်းစီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုပြန်ဆမျှရောက်လာတယ်။ ငါမဆိုမိန်းကလေးတွေတောင်မှငါ့ထံမှသူတို့ကိုပယ်ရနိုင်ခြင်းဖို့, ငါ့ကိုအာရုံစိုက်ရနိုင်ခြင်းကနေသွား၏။
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာငါဟာအလှဆုံးမိန်းကလေးနဲ့ချိန်းတွေ့တာပဲ။ ငါတို့အတူတူနေနေတုန်းပဲ။ ငါကောလိပ်ဘွဲ့ရနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသို့လက်ခံခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးနှစ်လ၊ သုံးလအကြာအထိကျွန်တော်လုံးဝပြန်မလာတော့ဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟာတကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ကျွန်မဟာအမြဲတမ်းစွမ်းအင်ပြည့်ဝနေပြီးကလေးတစ်ယောက်လိုအိပ်ခဲ့ရတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါ porn ကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ ငါ့ကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
ငါပြန်လာပြီ ငါရည်းစားနဲ့တစ်ပတ်လောက်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကစပြီး ငါအရှုံးပေးလိုက်ပြီးအခြေခံအားဖြင့်“ ဒါကိုငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါပုံမှန်ပြန်သွားနိုင်ပြီ” လို့တွေးခဲ့တယ် ငါမှားသွားတယ်။ ခဏကြာတော့အရမ်းဆိုးလာတယ်။ ငါ၏အကြောက်မက်ဘွယ်သောအလေ့အကျင့်ပြန်သွားပါ။ ရလဒ် - ငါကိုယ်အလေးချိန်တက်လာတယ်။ ငါလိင်အတွက်စိတ်မဝင်စားခဲ့သည်။ ငါနေမကောင်းလားလူတွေကငါ့ကိုဆက်ပြီးမေးတယ်။ ညမှာအိပ်လို့မရဘူး
ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာနေရတာလဲဆိုတာကိုငါမသိနိုင်ဘူး။ မည်သို့ပင်, ဒီမှာငါဖြစ်၏, စတင်။ ငါအားလုံးထပ်မံ reset ရန်ရှိသည်ငါသိ၏။
အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်, ငါအနာဂတ်အတွက်ဒါ pumped နေပါတယ်။ ငါထပ်မံအောင်မြင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ ငါ့ဘဝကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏အမှတ်အသားကိုနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်။ ငါတကယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးရက်လောက်ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုငါယောက်ျားတွေနှင့်အတူမျှဝေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ သင်အောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိပ်အဆင်မပြေပါနဲ့။ သင်အောင်မြင်မှုမရခဲ့လျှင်စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ ဒီဟာကတကယ်ကိုရှိတယ်။ တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်
TLDR: လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က nofap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ရလဒ်များအံ့ဖှယျရှိကြ၏။ ငါကတည်းကပြန်လာပြီးရလဒ်တွေကဆိုးရွားတယ်။ အခုငါစလုပ်နေပြီ အစကနေစလုပ်ရတာအရမ်းပျော်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအနာဂတ်အတွက်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။
Edit: ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ရှိပုံရသည်။ ငါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်သည်။ ငါအကြမ်းဖျင်းနှစ်လအကြာပြန်သည်။ ငါ့ကိုတက်ပြီးအခြား reboot တစ်ခုကိုကျူးလွန်ရန်ယခုအချိန်အထိအချိန်ယူရသည်။ ၆၄၉ ရက်ကတကယ်တော့မှန်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ် Streak စတင်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ငါ reddit လိုမျိုးအရာတွေကိုရှောင်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်တစ်လ၊ နှစ်လလောက်မကုန်မှီတိုင်အောင်ကျွန်တော့်အမှတ်အသားကိုတကယ်မပြန်ခဲ့ဘူး။
ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုအသုံးပြုပြီးကာလရှည်ကြာစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်